[Review] 3 Loại Sữa Rửa Mặt Rau Củ hot được yêu thích nhất | Muasalebang - Muasalebang
[Review] 3 Loại Sữa Rửa Mặt Rau Củ hot được yêu thích nhất | Muasalebang
Làm đẹp 0 lượt xem 30/05/2022
Đang Đọc: [Review] 3 Loại Sữa Rửa Mặt Rau Củ hot được yêu thích nhất | Muasalebang in Muasalebang
Ngemuva kosuku olude lomsebenzi kanye nemisebenzi yangaphandle, ukuhlanza isikhumba kuyisinyathelo esibalulekile. Izihlanzi zobuso zivame ukuba nzima ukususa zonke izinto ezinobuthi esikhumbeni. Ukunqoba lokhu, inkampani i-Wonder Bath yethule isihlanzi semifino esishisayo, hhayi eKorea kuphela kodwa futhi esidume kakhulu eVietnam.
1 Kuyini ukugeza ubuso bemifino?
2 Ingabe i-Vegitoks yokuhlanza imifino ilungile?
2.1 2.1 Izithako kuma-Super Vegitoks okugeza ubuso
2.2 2.2 Ukuhlukaniswa kwe-Vegitoks yokuhlanza imifino
2.3 2.3 Amanye amanothi ngesikhathi sokusetshenziswa
3 Ukubuyekezwa kwezinhlobo ezi-3 ze-Super Vegitoks Cleanser detox yokugeza ubuso bemifino
3.1 3.1 Isithelo esibomvu nemifino yokuhlanza ubuso
3.1.1 Isithako esiyinhloko
3.2 3.2 Isihlanzi semifino nezithelo esiphephuli
3.2.1 Isithako esiyinhloko
4 Sebenzisa ukugeza ubuso bemifino ngendlela efanele
4.1 Isinyathelo soku-1: Thola inani elifanele lokuhlanza
4.2 Isinyathelo sesi-2: I-massage ephumuzayo
4.3 Isinyathelo sesi-3: Lindela isihlanzi ukuthi sikhiphe ubuthi
4.4 Isinyathelo sesi-4: Hlanza ngamanzi abandayo
Kuyini ukugeza ubuso bemifino?
Ukugeza ubuso bemifino umugqa womkhiqizo izithako zawo eziyinhloko ziyimifino ekhishwe. Baziwa nangokuthi ama-Super Vegitoks Cleanser detoxifiers e-Korea kanye nakwamanye amazwe ashisayo ase-Asia. Amakholwa e-Skincare eVietnam asheshe abamba leli gagasi.
I-Super Vegitoks Facial Cleanser iqukethe izithako zemvelo ezifana ne-avocado, ilamula, imifino, izimila zasolwandle … Ngakho-ke, umkhiqizo unamandla okondla nokuhlanza isikhumba futhi ube nenani leminye imiphumela efana nalokhu:
Hlanza futhi ukhiphe ubuthi esikhumbeni obuqongelela isikhathi eside.
Vimbela, anti-ukuvuvukala futhi welaphe induna. Emkhiqizweni uqukethe itiye elihlaza, amaqabunga e-mint aletha inqwaba ye-vitamin C. Ngakho-ke, umkhiqizo uphikisana nokuvuvukala kanye nokulawula uwoyela kusebenza kahle, ukuvimbela ukwakheka kwezinduna.
Ikhipha amaseli afile, ukungcola, amafutha avala izimbotshana.
Isikhiphi sezimonyo: Hlanza izimonyo njenge-eyeliner, i-lipstick, i-lipstick …
Ukusebenzisa nje ulayini wokuhlanza ubuso ovela enkampanini yaseKorea i-Wonder Bath, ungenza zonke izinyathelo zokuhlanza zendlela yokunakekela isikhumba. Esikhundleni sokwenza izinto eziningi ezikhohlisayo ngaphambili, abasebenzisi badinga nje ukugeza ubuso babo nge-Super Vegitoks Cleanser bese besebenzisa imaski ukuze banakekele isikhumba sabo.
Ingabe i-Vegitoks yokuhlanza imifino ilungile?
Vegitoks imifino yokuhlanza iwumkhiqizo ophuma enkampanini ebizwa ngokuthi Wonder Bath. Selokhu wethulwa, lo mkhiqizo udale i-craze hhayi e-Korea kuphela. Abesifazane abaningi eVietnam baphinde bazingela ngokuxhamazela lo mkhiqizo ukuze bawuzame. Ngakho-ke, umkhiqizo uthengiswa emakethe ngenani eliningi impela.
Abasebenzisi abadingi ukuchitha isikhathi esiningi futhi badlule ezinyathelweni eziningi zokuhlanza isikhumba njengangaphambili. Ukusebenzisa nje inani elanele lokuhlanza imifino nakho kusiza ukususa ubuthi, ukungcola esikhumbeni kanye nezimonyo ngokuphelele. Isikhumba sihlanzwa ngokujulile sihlanganiswe nokunakekelwa kwesikhumba ukusiza abasebenzisi babe nesikhumba sobusha.
Impela ngemva kokusebenzisa umkhiqizo, isikhumba sizoba bushelelezi futhi sicwebezele. Ukuze uzuze umphumela omuhle kakhulu, kufanele ufunde ngokucophelela ukuthi umbala wakho wesikhumba ufanelekile kunoma yimuphi umkhiqizo. Ngoba uhlobo ngalunye luzoba nezingxenye zalo ezisebenzayo. Ngejeli eliwuketshezi elikhanyayo, ngemuva kokufakwa ebusweni, kuzovela ama-bubbles amancane.
I-Super Vegitoks Cleanser I-Detox inephuzu eliyinhloko lokuhlanganisa lokukwazi ukushintsha ngokuphelele okhilimu bokususa izimonyo. Ikhono lokususa izimonyo lihle kakhulu. Ngezendlalelo zezimonyo eziwugqinsi, okunzima ukukhukhuleka, kufanele usebenzise imikhiqizo ekhetheke kakhulu. Lona ngempela umkhiqizo abasebenzisi abangakwazi ukuwuziba.
2.1 Izithako kuma-Super Vegitoks okugeza ubuso
Izithako ezivela ku-100% yemifino yemvelo yizona ezivelele kulo mugqa womkhiqizo. Ezinye zazo yiSu Hao, Ilamula, Iqabunga Lelethisi, Amazambane, Imbewu Kakolweni, Iklabishi, Isilimo Esidliwayo esinamagatsha anamanzi, ukholifulawa, Utamatisi, Iqabunga Le-Mint…
I-Lemon Extract: Ivimbela ngokuphumelelayo i-acne, ihlanza isikhumba, iqede amagciwane ngokuphumelelayo. I-Acid kulamula isiza ekuqedeni ubuthi, ukulwa nokuguga, isiza isikhumba sibe mhlophe.
Ukukhishwa kwegciwane likakolweni: Iqukethe amaminerali amaningi namavithamini ukusiza ukondla isikhumba. Iphinde ivuselele futhi yakhe amaseli esikhumba amasha.
Iklabishi ekhishwe, i-avocado, i-kohlrabi: Balance umswakama, ukondla isikhumba.
2.2 Ukuhlukaniswa kwe-Vegitoks yokuhlanza imifino
I-Vegitoks yokuhlanza imifino okwamanje ihlukaniswe yaba izinhlobo ezintathu. Zinezici ezilandelayo kanye nokusetshenziswa:
I-Violet: Isikhumba sikhanye futhi siqine. Umkhiqizo ufanelekile esikhumbeni esingaphili, isikhumba esomile.
Okuluhlaza Okwesibhakabhaka: Ukulawula uwoyela okuhle, ukuthambisa isikhumba, ukwandisa amandla okuthambisa. Labo abanesikhumba esihlangene, isikhumba esinamafutha, amafutha emvelo kufanele basebenzise.
Okubomvu: Isiza isikhumba ukuthi sibukeke sisincane futhi sigqamile, sifanele isikhumba esingalingani, esibuthuntu.
2.3 Amanye amanothi ngesikhathi sokusetshenziswa
Ukuze umkhiqizo ukhuthaze umphumela wawo omuhle kakhulu esikhumbeni, udinga ukugcina izinto ezimbalwa engqondweni. Ngenxa yokuthi lo mugqa wokugeza ubuso umayelana nokukhipha ubuthi emzimbeni, uzohluka kancane kojwayelekile:
Kusanconywa ukuthi usebenzise isikhiphi sezimonyo ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo.
Asikho isidingo sokumanzisa ubuso noma izandla ngaphambi kokusetshenziswa. Njengoba isikhumba esimanzi senza kube nzima ukukhipha amagwebu, umphumela wokuhlanza isikhumba uyancipha.
Yeka ukusebenzisa umkhiqizo uma uguliswa yinoma yiziphi izithako.
Gwema ukusebenzisa esikhumbeni eduze kwamehlo.
Ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu, khetha imikhiqizo efana nezici zesikhumba sakho.
Uma usebenzisa naka i-HSD.
Gwema ukubeka umkhiqizo ekukhanyeni kwelanga okuqondile, uwugcine endaweni eyomile.
Imikhiqizo Ethengiswayo 50%
Ukubuyekezwa kwezinhlobo ezi-3 ze-Super Vegitoks Cleanser detox yokugeza ubuso bemifino
Njengoba kwethulwe ngenhla, I-Super Vegitoks yokuhlanza ubuso kuhlanganisa izinhlobo ezintathu ezahlukene. Uhlobo ngalunye luzoba nezithako zalo, okuholela ekusetshenzisweni okuhlukene. Nasi ukubuyekezwa kwezihlanzi zemifino zazo zontathu izinhlobo ongabhekisa kuzo:
3.1 Isithelo esibomvu nemifino yokuhlanza ubuso
Lo mkhiqizo ulungele labo abanesikhumba esingalingani, esibuthuntu. Sebenzisa izithelo nemifino yokuhlanza ubuso Umbala obomvu usiza ukuqeda ubuthi futhi ukhanyise isikhumba ngemva kwesikhathi sokusetshenziswa. Umklamo womkhiqizo usesimweni sebhodlela elikhulu, eline-cap yepompo elula ukuyisebenzisa. Iphuzu elihle lomkhiqizo iphunga elimnandi, elithambile lemvelo.
Ngomugqa obomvu we-Super Vegitoks Cleanser, kuzoba nezithako ezisemqoka kanjena:
I-Pomegranate Extract: I-Anti-inflammatory, moisturizing, iletha ukusha nokushelela esikhumbeni. Ngaphandle kwalokho, ukulwa nokuguga kusebenza kahle ngokufiphala kwamabala, umbala wombala, amabala amnyama, ukuqina okwandayo, isikhumba esikhanyayo, ukwelapha izinduna …
Isaqathe: Moisturize isikhumba. Lesi sithako siphinde sibe nemiphumela emihle uma kuziwa ekwelapheni izibazi namabala abangelwa yizinduna, kusiza ukukhanyisa ngisho nebala lesikhumba. Ngaphandle kwalokho, iphinde idale umgoqo wokusiza ukuvikela isikhumba elangeni, ukulwa nokuguga.
Utamatisi: Yehlisa usayizi wama-pores, isiza izilonda zesikhumba ukuba ziphole. Ngesikhathi esifanayo, isikhumba sibe mhlophe, isikhumba esihlanzekile ngokwemvelo, sixoshe izimpawu zokuguga.
Ijikijolo: Lesi sithako sisiza ekuthuthukiseni umbala webala, simanzise futhi sibe nemibimbi eshelelayo esikhumbeni ngoba sinothe ngovithamini C. Ngalokhu, sinikeza isikhumba esimhlophe esikhazimulayo, esibushelelezi futhi esikhazimulayo. Ama-Strawberries nawo asiza ukumunca amafutha amaningi, akhiphe isikhumba.
Umkhiqizo udala i-foam eningi, ukuthungwa kwe-gel obomvu kunephunga elimnandi, elingokwemvelo. Umthamo wephiko likhulu, lisetshenziswe isikhathi eside, i-cap igcwele iphampu elula. Ngezithako eziyinhloko ezikhishwe izaqathe, utamatisi, ama-strawberries, amapomegranati abomvu, ngakho-ke akugcini nje ukuthi kuyingozi futhi kuphephile esikhumbeni, ukuhlanza okubomvu kwemifino nezithelo kuphinde kuthambekele ekukhanyiseni isikhumba nokuhlanza isikhumba ngokuphumelelayo.
Naphezu kokuba nezinzuzo eziningi, umkhiqizo usenobubi obuthile. Ngokuvamile, ibhodlela likhulu impela, ngakho-ke lapho uhamba udinga ukulikhipha ukuze ulisebenzise. Ngaphezu kwalokho, ikhono lokususa izimonyo liphakathi. Ngakho-ke, uma usebenzisa usadinga ukusebenzisa isikhiphi sezimonyo esengeziwe.
3.2 Isihlanzi semifino nezithelo esiphephuli
Lo mugqa womkhiqizo ufanelekile kakhulu esikhumbeni esomile, esimahhadlahhadla, esingaphili, esingenawo amanzi, isikhumba esibucayi. Ukuthungwa kwe Ukugeza ubuso be-Vegitoks umbala omuhle onsomi. Ngaphakathi kunezinhlayiya eziningi ezicwebezelayo ezincane kodwa ezibushelelezi. Ngenxa yokuthi isithako esiyinhloko sivela emifino, iphunga lomkhiqizo lifana ne-smoothie emnandi, enephunga elimnandi.
I-Super Vegitoks Cleanser Blue iqukethe izithako eziningi ezilungele isikhumba. Amanye amagama aphawulekayo angashiwo kanje:
Igciwane likakolweni: Iqukethe amaminerali namavithamini asiza ukuvuselela nokugqugquzela amangqamuzana esikhumba. Ngaphandle kwalokho, ukuhlinzeka ngezakhi zokondla isikhumba esimhlophe esikhanyayo, esibushelelezi.
I-Spirulina: Ukunakekelwa kahle kwesikhumba kanye ne-anti-inflammatory. Iyasebenza futhi ekulweni nokuguga.
Iklabishi eliluhlaza: Linqanda ukuvuvukala, linciphisa ukungezwani komzimba nezinto ezithile. Ngenxa yezithako ezinothe ngama-amino acid, amavithamini C, K, ne-folate, kusiza ukwakha ifilimu evikela isikhumba uma isendaweni eyingozi. Ngaphandle kwalokho, kwandisa ukumelana, kuletha isikhumba esigcwele ubungqabavu, sinempilo, sixosha ukuguga.
Itiye elihlaza, ulamula ophuzi, ukwatapheya: Isikhumba esihlanzekile, anti-inflammatory, antibacterial. Lezi zithako zibuye zisize ukwenza isikhumba sibe mhlophe, sithuthukise ukunwebeka, isikhumba esibushelelezi, futhi sibe nomphumela ophumelelayo wokulwa ne-oxidant.
I-Super Vegitoks Cleanser Blue iqukethe izithako eziyinhloko ezifana ne-avocado, i-spirulina.
Ngokuthungwa kwejeli eluhlaza okwesibhakabhaka, umkhiqizo ungakha igwebu eliningi kodwa ungenzi isikhumba somile. Ibhodlela linomthamo omkhulu, lihlala isikhathi eside, futhi i-cap cap igcwele ukusetshenziswa okulula. Umkhiqizo unezithako ezikhishwe emvelweni, ngakho-ke uphephile futhi unempilo esikhumbeni. Ikakhulukazi efanelekayo abanikazi besikhumba samafutha ngoba ukugeza ubuso bemifino kunekhono elihle lokulawula amafutha, ukuhlanza ngokuphumelelayo isikhumba.
Okuwukuphela kwe-downside yalo mugqa womkhiqizo yiphunga elinamandla. Lokhu futhi kuyaqondakala kakhulu futhi kujwayelekile ngoba izithako eziyinhloko zomkhiqizo zenziwe ngemifino ephilayo.
Sebenzisa ukugeza ubuso bemifino ngendlela efanele
Ngokungafani nezihlanzi zobuso ezijwayelekile, iSuper Vegitoks Cleanser inefomu elisebenzayo elifana nemaski ye-detox. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwalo mugqa womkhiqizo nakho kuhluke kancane. Abanye abasebenzisi bokuqala bazohlangabezana nokudideka okuncane.
Lapha, sizokuqondisa ohlelweni lokusebenzisa isihlanzi semifino esijwayelekile nesingokwesayensi. Esikhundleni sokuthatha inani elingafanele lokuhlanza, ukulisebenzisa ebusweni bonke, ukulilandela ngendlela efanele kuzosiza ukukhulisa ukusebenza kahle kwayo. Lapha, isikhumba sikhululekile, sihlanzekile:
Isinyathelo soku-1: Thola inani elifanele lokuhlanza
Umsebenzisi ukhipha inani elifanele lejeli ukuze ageze ubuso bakhe. Ngaphambi kokufaka isicelo ngqo ebusweni, kufanele usebenzise ijeli ezandleni zakho ngokulinganayo. Ukuze ukwandise ikhono lokuhlanza i-foam, kufanele ugeze izandla zakho kahle bese usula.
Thatha inani elifanele lokuhlanza bese udala i-lather ngaphambi kokugcoba ebusweni
Isinyathelo sesi-2: I-massage ephumuzayo
Abasebenzisi basebenzisa iminwe yabo ukubhucunga ngokuzungeza okuthambile esikhumbeni. Ezindaweni lapho ukungcola namafutha kuvame ukuqoqwa khona, njengebunzi, isilevu, izihlathi, ibhuloho lekhala, ukusikhipha umzimba kufanele kugxile kakhulu. Lokhu kusebenza kufanele kuthathe cishe imizuzu engu-1-2 ukusiza ukuhlanza isikhumba ngempumelelo.
Isinyathelo sesi-3: Lindela isihlanzi ukuthi sikhiphe ubuthi
Isihlanzi sezithelo nemifino lapho ukukhishwa ubuthi kuzophuma igwebu ngokuzenzakalelayo. Abasebenzisi manje sebengakwazi ukusizakala ngokugeza umlomo, ukuxubha amazinyo, nokwenza inhlanzeko yomuntu siqu. Isikhathi esithathwayo ukuze isihlanzi sibe negwebu sisuka emizuzwini emi-2 kuya kwemi-3.
Isihlanzi sezithelo nemifino lapho ukukhishwa ubuthi kuzophuma igwebu ngokuzenzakalelayo.
Isinyathelo sesi-4: Hlanza ngamanzi abandayo
Ngemva kwesikhathi esingenhla, umsebenzisi wenza enye imassage ebusweni. Ukuze uqinise ama-pores, sebenzisa amanzi abandayo ukugeza. Izinto zokuhlanza akufanele zihlale ngaphezu kwemizuzu emi-4 esikhumbeni, noma zisabhavuza. Ngalesi sikhathi, isikhumba sivame ukucasuka, ukoma, nokulimala. Sicela wazi ukuthi izandla kufanele zihlale zihlanzekile ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo. Ngakho-ke, hlala ugcina ibhodlela lesihlanzi sobuso eduze kwebhodlela le-sanitizer yesandla.
Ulwazi mayelana nomugqa ukugeza ubuso bemifino kwabiwe. Ngaphambi kokukhetha, kufanele wazi ukuthi hlobo luni lwesikhumba onalo. Ukusuka lapho, khetha umkhiqizo ofaneleka kakhulu. Uma ukhetha umkhiqizo ongalungile, kulula ukubhekana nezimo ezithile zesikhumba njengokucasuka, ukoma, nokungakhululeki.
Xem Thêm [Review] TOP 10 Kem Dưỡng Da Tay Mềm Mịn Trắng Da Tốt Nhất | Muasalebang
Tai nghe Soundpeats TrueAir 2 chính hãng, giá rẻ | Muasalebang
iPhone, iPhone 12 giá rẻ, chính hãng, Trả góp 0% | Muasalebang